Ithebhulethi eshibhe emhlabeni
Lezi zingqimba manje zithandwa, futhi intsha eningi ungathanda ukuba into enjalo. Nokho, izindleko injabulo enjalo ngokuvamile lingaphezu komthamo abathengi abaningi. Ezinye amaphilisi ngenkathi uthenga ngesikweletu, abanye bazama ukuthatha okungenani ithebhulethi nengabizi. Ngaphambi kokuthenga leli thuluzi, kubalulekile ukuba ucabange ukuthi ngempela elihlangabezana nazo zonke izidingo umthengi. Ngoba ngokuvamile abantu bathenga, ukugxila imfashini. Ngesikhathi esifanayo awuhambanga sibalo amakhono yedivayisi.
Futhi eqolo, futhi iningi amaphilisi ezishibhile ukuhlangabezana nezidingo eyodwa - bona jabulisa. Ngakho-ke, uma umuntu uhlela ukusebenza laptop ke lesikahle kuyoba ephathekayo noma ngisho netbook. Ithebhulethi kuyoba engenamsebenzi lapha. Nokho, uma kwasekuqaleni ufuna ukuzijabulisa, ngisho tablet eshibhe njengomgijimi ophelele multimedia isikhungo. Kwakuyinjongo wakhe oyinhloko. Lapho ekhetha kudivayisi, kubalulekile ukugxila hhayi kuphela kunani.
Inani lapho uthenga akufanele neze nime endaweni yokuqala. Ngoba, ukuthola kuphela ngenani uhla ethile, ungathola yini lokho okufunayo. Nokho, uma imithombo anqunyelwe, singacabangela lokubolekwa isabelomali nokusebenza kwabo. amadivaysi ezintathu ezingasisiza.
Ithebhulethi eshibhe emhlabeni - Aakash Tablet. Kubiza nje $ 35. Nokho, ukuthenga ngalesi intengo kungaba umfundi noma umfundi. Zonke abanye babe yokuyikhokhela kancane kuka amadola 60. Nokho, lokhu akukhona obuhlungu kakhulu. izinga kudivayisi muhle ngempela. Umkhiqizi Aakash Tablet - yinkampani yaseCanada DataWind Nokho, intuthuko wathatha ingxenye njengoba uhulumeni waseNdiya, ngakho ipuleti ubhekwa Indian. Okuwukuphela ethile yalolu phiko - memory of 256 MB.
Kindle Fire Amazon, kungase kungabi ithebhulethi ashibhe Nokho, izindleko 200 nje zamadola. Ikhwalithi idivayisi cishe efanayo ukuthi we amayunithi kabili njengoba ezibizayo. Umkhiqizi kwezinto zikagesi, inkampani i-Amazon, ine esitolo inthanethi eyaziwa emhlabeni wonke. Yingakho le nhlangano waqhubeka ukukhulula ezifana tablet engabizi. Inkampani ulindele ukuze recoup izindleko ngokwandisa yokuthengisa. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela aggregate ukuthi okuqukethwe ingalandwa umsebenzisi sisebenza kuphela ukugcina umenzi.
Mhlawumbe ithebhulethi eshibhe ukuthi ungakwazi ukuthenga namuhla nokusetshenziswa ngaphandle kwemibandela, kuba Chinese Ainovo Novo izindleko 7. Ezazimzungezile - engaphansi kwekhulu zama-dollar. Yiqiniso, izingxenye izinga kusho ngokwanele, uhlolo lokubuka akulona okungcono. Nokho, izindleko idivayisi edonsela abathengi abaningi. Esinye isici elikhangayo ithebhulethi ukuthi kusekelwe Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Nasi uhlu izibhebhe eshibhe ezisebusweni emakethe namuhla. Nokho, njengoba kushiwo ngenhla, ukuthola ezobuchwepheshe, singagxili kuphela intengo - kungcono enkambweni embi senzo. Ngezinye izikhathi kungcono ukulinda bese uthatha idivayisi ezibizayo ukuthi uzohlangana zonke izidingo yomnikazi. Ngokuphathelene amaphilisi Chinese kanye Smartphones, abaningi akhononde izinga amadivaysi. Ngezinye izikhathi, basuke awasekelwe izicelo ethandwa e izandiso West. Kodwa ungathola ukuthi zisekelwa hlelo, okuyizinkinga ezivamile China. Ngubani - lisho okuthile ikhwalithi embi umsindo, umuntu - ungathandi yokuhumusha umbala ikhwalithi yesithombe nhlobo.
Nokho, ukuze nahlulele izinga Smartphones kanye amaphilisi kungenzeka labo uthenge kubo kuphela. Othile ngempela ajabule ngokuthenga kwakho, futhi isebenzisa lezi amadivaysi iminyaka eminingi. Uma sikhuluma izinga, amapuleti engcono ukhiqiza namanje Apple. Nokho, intengo zinsizakuphila oluhambisana ukusebenza kwabo okusezingeni eliphezulu.
Kanjani ukwenza Resistor parallel?
I rectifier esigcwele igagasi, nendlela okusebenza
Indlela ukukhetha hob?
Garnier: isikhumba ecacile - lokhu ungokoqobo
Trichomonas emathunjini: Izimpawu, Ihlahlubo, Ukwelashwa
Kangakanani ukulungisa carburetor
Nangokuvikela zokwakha kanye ngezigaba zabo. Fibre nangokuvikela izinto